Kooxda Gobalka Hawd Oo Ugu Danbayn Ka Aarsatay Kooxda Ay Sida Wayn U Xifiltamaan Ee Gobalka Maroodi Jeex, Hawd Oo Kulan Xamaasad Badan Rajeedii Ku Soo Noolayay Iyo Togdheer Oo Barbaro Gool La’aan Ah La Gaagashay Kooxda Gobalka Badhan |
Waxaa maalintii shanaad si habsami ah garoomada Xaaji Dahir Stadium iyo Alamsey Stadium oo ku kala yaala magaalooyinka Boorama iyo Burco uga socda wareega kowaad ee isreeb reebka tartanka koobka gobolada Somaliland, waxaana maanta la ciyaaray kulamadii shanaad ee isreeb reebka tartanka gobolada Somaliland. Kooxda gobalka Hawd oo ciil badan u qabtay kooxda gobalka Maroodi Jeex ayaa 3:1 ku xaaqday kooxda koobka gobolada Somaliland difaacanaysa ee M. Jeex kulanka xamaasad badan oo ka dhacay Xaaji Daahir Stadium halka kooxda Togdheer ay barabro gool la’aan ah la gashay kooxda gobalka Badhan.
Kulanka kooxaha Gobalada Maroodi Jeex Vs Gobalka Hawd:-
Kooxda gobalka Hawd ayaa ugu danbayn ka aarsatay isla markaana guul wayn ka gaadhay kooxda koobka gobolada Somaliland difaacanaysa ee Maroodi Jeex. Kooxda gobolka Hawd oo kulan ku qasbanayn inay guulaysato si ay baaqi ugu sii ahaato tartanka gobilada Somaliland ayaa dhulka jiiday wiilasha gobolka Marooji Jeex waxayna guushan Hawd ku gaadhay 3:1, waxayna guusha Hawd keentay in group-ka dhimashada ee Group A uu noqday mid jiq laysku yahay.
Groupkan ayay ku wada jiraan xulalka gobolada Awdal oo afar dhibcood hogaanka ku haya, Hawd iyo Maroodijeex oo min saddex dhibcood leh laakiin Hawd ayaa kaalinta labaad ugu jirta farqiga goolasha halka Buuhoodle ay hal dhibic wali leedahay.
Kulankan Clasico-da Somaliland ayaa Xaaji Daahir Stadium ku dhex maray kooxaha xulalka gobolada Maroodijeex iyo Hawd. Maroodijeex iyo Hawd ayaa ah kooxo si wayn ugu xifiltama tartamada gobolada Somaliland.
Maroodijeex iyo Hawd ayaa hore tartanka gobolada somaaliland iskaga horyimid afar jeer waxayna hore guuluhu raaci jireen kooxda gobalka Maroodijeex iyada oo waliba M.Jeex ay saddex jeer guulaysatay isla markaana ay Hawd laba koob ay ka qaaday.
Kulankan ayay labada kooxood ciyaarayeen iyaga oo ujeedooyin kala duwan u dagaalamayay, Maroodi Jeex ayaa u dagaalamayay inay guushoodii labaad gaadhaan taas oo ay maanka ku hayeen inay wareega sideed dhamaadka ugu soo bixi karayeen, laakiin Hawd ayaa ogayd in waxaan guul ahayn ay rajadooda tartanka gobolada Somaliland halis galin karto halka guuldaro soo gaaadha Hawd ay gabi ahaanba ka reebi lahayd tartanka gobolada Somaliland sidaa daraadeed kulankan waxay Hawd qaadaysay iima laabna guul ama geeri.
Jamaahiirta gobalka Hawd oo xamaasad gaar ah caan ku ah ayaa garoonka si wayn uga dhex muuqday iyaga taageero sawaxan badan ah la garabtaagnaa kooxda gobalkooda Hawd. Kulankan ayaa ahaa kulankii ugu xamaasada badnaa ee sanadkan laga ciyaaro tartanka gobolada Somaliland.
Kooxda gobalka Hawd ayaa ciyaarta ku soo gashay dardar aan la joojin karin, waxayna doonayeen inay qaybta hore ee ciyaarta ay goolal dhaliyaan si ay rajadooda ka sii mid ahaansha tartanka ay u sii wataan.
Kooxda gobalka Hawd ayay u suurtogashay inay qaybta hore ee ciyaartaba 3:0 ay hogaanka ku qabto taas oo noqotay markii ugu horaysay taariikhda tartanka gobolada Somaliland oo gobalka Maroodi Jeex saddex gool looga hormaro.
Amiin Diifaw ayaa gobalka Hawd goolka furitaanka udhaliyay isaga oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Hawd ciyaarta hogaanka ugu qabtay, sidoo kale Hawd ayaan kooxda gobalka Maroodijeex siin fursad ay ku fikirto, waxayna markale heshay goolka ay ciyaarta kaga dhigtay 2:0 taas oo kooxda M. Jeex dhulka jiiday.
Laakiin dardarta kooxda gobalka Hawd ayaan intaa ku joogsan, waxaana goolka saddexaad Hawd u saxiixay Cabdiraxmaan Ilkacase kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Hawd hogaanka ugu dheeraysatay, kooxda M. Jeex ayaa u muuqatay inay xili horeba kala daadatay halka Hawd ay uumuuqdeen kuwo doonayay inay ka aarsadaan Maroodjeex oo guuldarooyin hore soo gaadhsiiyay sanadihii hore.Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:0 ay kooxda gobalka Hawd hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybta danbe ee ciyaarta ayay kooxda M.Jeex soo laabtay iyada oo raadinaysa sidii ay iskaga soo celin lahayd goolasha looga hormaray qaybta hore ee ciyaarta.
Qaybta danbe ee ciyaarta ayaa ahayd mid adag iyada oo kooxda gobalka Hawd uu qorshaheedu ahaa inay ugu yaraan ilaashato goolasha ay qaybta hore dhashadeen laakiin Hawd ayaa kaadhka cas laga siiyay Sharmarke Yaashii taas oo keentay in Hawd ay qaybta danbe difaac badan gasho.
Laakiin kooxda Maroodijeex ayayna maanta ahayn maalintoodii iyaga oo awoodi waayay inay ciyaarta si dhab ah ugu soo laabtaan laakiin waxaa usuurtogashay inay goolka calanka la yimaadaan taas oo ciyaarta ka dhigay 3:1 ay Hawd ku gaadhay guul cimrigiiba mar ah. Guushan ayaa soo gabagabaysay guuldarooyin xanuun badan oo gobalka Hawd ay kala kulmi jireen kooxda Marooji Jeex.
Guushan ayaa Hawd laba arimood oo waa wayn ugu fadhida, waxayna ugu horayn Group A ka dhigtay mid adag oo ay fursad u haystaan inay u soo bixi karaan wareega sideed dhamaadka oo Hargaysa Stadium ka dhigi doona, waxa kale oo ay iska maydheen ceebtii iyo guuldarooyinkii finaladii hore ka soo gaadhay kooxda Maroodijeex.
Kala saraynta Group-ka Dhimashada ee Group A ee tartanka Gobolada Somaliland qaybtiisa Awdal:-
1. Awdal = 4 dhibcood
2. Hawd =3 Dhibcood
3. M.Jeex =3 Dhibcood
4. Buuhoodle = 1 dhibic
Kulanka Kooxda Gobolka Togdheer Vs Kooxda Gobalka Badhan:
Kooxda gobalka Togdheer ayaa wali ku dhibtoonaysa tartanka goblada Somaliland oo qaybta barriga marti galinayaan waxayna kooxda kubbada cagta Togdheer barbaro gool la’aan ah la gashay kooxda gobalka Badhan. Badhan iyo Togdheer oo ay hore guuldarooyin u soo gaadheen ayaan wali hal gool ka dhalin kulamadii ay ciyaareen.
Kulankan adag ayaa garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco ku dhex maray kooxaha gobolada Togdheer iyo Badhan, waxayna labadan kooxood ay kulankan ciyaarayeen iyaga oo soo guuldaraystay kulamadii hore isla markaana koox kasta ayaa u baahnayd guul si ay rajadeeda inay wareega sideed dhamaadka u soo baxdo ay u soo noolayso.
Maadaama oo ay kulankan labada kooxoodba ku qasabaanaayeen inay guul gaadhaan ayay taasi sabab unoqotay in labada kooxoodba ay taxadar dheer aad ah sameeyaan si ay kulankan natiijo fiican uga helaan.
Kooxda gobalka Togdheer ee martida loo ahaa ayaa hore guuldaro ugala soo kulantay kooxda gobalka Daadmadheedh halka kooxda gobalka badhan ay guuldaro iyaduna kala kulantay kooxda gobalka Xaysimo. Badhan iyo Togdheer ayaa kulankan ciyaarayay iyaga oo aan wax dhibco ah lahayn halka Daadmadheedh iyo Xaysimo ay min afar kulan lahaayeen.
Qaybta hore ee kulanka dhex maray kooxaha Togdheer iyo Badhan ayayna midkoodna u suurtogalin inay wax goolal ah iska dhaliyaan waxayna qaybta hore ee ciyaartu ku dhamatay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada kooxood raadinayeen sidii ay guul u gaadhi lahayeen sababtoo ah barbaro ay labada kooxood galaan ayayna midkoodna dani ugu jirin.Kooxda gobalka Togdheer ayaa qaybta danbe ahayd kuwa fursadaha ugu badan helay laakiin haddana weerarkooda ayaan ahayn mid dhamaystirka ku fiican.
Dhamaadkii ciyaarta ayay kooxda Badhan heshay fursad gool loo fishay laakiin goolhayaha kooxda Togdheer ayaa badbaadin fiican sameeyay isaga oo kubbada koorne u saaray.ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah. Barbaraha ay Togdheer iyo Badhan galeen ayaa la micno ah in Daadmadheedh iyo Xaysimo ay fursad fiican oo ay sideed dhamaadka ugu soo gudbaan ay haystaan.
Togdheer ayaa kulankeeda xiga la ciyaari doonta kooxda Xaysimo oo hore guul uga soo gaadhay kooxda Badhan halka kooxda gobalka Badhan ay la ciyaari doonto kooxda gobalka Daadmadheedh. Laakiin Togdheer iyo Badhan ayaa kulmada u hadhay u baahan guul inkasta oo ay rajadoodu aad u yartahay.Haddii ay Togdheer iyo Badhan kulamada u hadhay guulaystaan ayay taasi group kan ka dhigi karta inay min afar dhibcood yeeshaan.
Kala saraynta Group A ee tartanka Gobolada Somaliland qaybtiisa Togdheer:-
1. Daadmadheedh = 4 dhibcood
2. Xaysimo =4 Dhibcood
3. Togdheer =1 Dhibic
4. Badhan = 1 dhibic